China Deep Tissue Vibration Muscle Massage Gun emepụta na suppliers |Zhaolong
Egbe ịhịa aka n'ahụ nke anụ ahụ miri emi
Egbe ịhịa aka n'ahụ anụ ahụ miri emi
Ewelatala oge mgbake
Na-ewepụ lactic acid
Na-ewepụta eriri akwara
Na-agbaji anụ ahụ
Mmụbawanye nso nke ngagharị
Nkọwa nke ngwongwo
Ọnụ ụtụ RMB nke ụlọ ọrụ mbụ (yuan/set)
Ụdị moto: 5025 brushless DC
Ike batrị: 2500mAh (18650 Li-on batrị 6pcs)
Isi ịhịa aka n'ahụ: isi ịhịa aka n'ahụ 6
Ogologo ogologo: 10.0mm
Oke moto: 50mN.m
Ngbanwe: Ngbanwe ọnọdụ 5
Metụ ihuenyo njikwa
Ntughari ọsọ: 1400-2700RPM
Oge Nchaji: 1.5-3hours
Oge ọrụ: 3-8hours
Nha ngwaahịa: 176.5x70x233.5mm
FDAFCC, CE, ROHS
igbe ngwá ọrụ akwa akwa + igbe ozi
1.WHY KA Ị RỊRỊ YA ---- egbe ịhịa aka n'ahụ nwere ike inyere onye ọrụ aka ịkwụsị isi ike na mgbu, mee ka ọbara mgbali elu, meziwanye ahụike zuru oke nke anụ ahụ dị nro, ọzọ, ọ nwere ike igbochi fasciitis nke bụ ụdị ihe mgbu na mgbu. siri ike gwọọ mbufụt kpatara site na adhesion n'etiti fascia na mọzụlụ.
2.Full Body Relief 5 Speed ​​& 6 Massage Head ----Versatile egbe atụmatụ 5 mgbanwe ọsọ / ugboro ugboro & 4 ịhịa aka n'ahụ isi Atụmatụ maka ezubere iche nrụgide isi n'olu, azụ, nwa ehi, ụkwụ, ubu, hip na ndị ọzọ.
3. Ergonomic Lightweight Design ---- The ergonomic aluminum metal alloy massager body ana achi achi na Massage Gun bụghị nanị fechaa kamakwa inogide.Ihe njide silicone dị nro ma dị mfe n'aka, gbochie ọnyà na ịdaba n'aka wee hụ na ị na-achịkwa nke ọma ugboro na ike nke ọgwụgwọ anụ ahụ gị.
4. LED Touchscreen ---- LED touchscreen na-enye gị ohere ịhazigharị ọsọ ọsọ 5 dị iche iche, dabere na otu akwara gị na mmasị gị.
Mgbakwụnye isi egbe ịhịa aka n'ahụ
A na-enye egbe ịhịa aka n'ahụ anyị nwere obere 6 dị mfe, dị mfe ihicha isi mgbanwe.Ọnụ ndị isi dị iche iche na-akwado ụdị ọgwụgwọ dị iche iche iji kwado ahụike na arụmọrụ gị.
Gburugburu isi - izugbe anụ ahụ zuru oke ịhịa aka n'ahụ.Ezigbo mgbakwunye maka ndị mbido.
Obere okirikiri isi - izugbe anụ ahụ zuru oke ịhịa aka n'ahụ.Maka ọrụ akwara miri emi gbadoro anya karị.
Flat isi – izugbe anụ ahụ zuru oke ịhịa aka n'ahụ.Maka mmụba siri ike na omimi.
Isi pneumatic - ịhịa aka n'ahụ maka akwara nwere mmetụta.Ijikwa ebe ndị ahụ na-egbu mgbu karị.
Isi ọkpụkpụ azụ - ịhịa aka n'ahụ ọkpụkpụ azụ.Mgbakwụnye isi akọwapụtara.
Nnukwu isi dị larịị - Mpaghara akwara.Belata njigide akwara, mee ka mgbanwe dịkwuo elu
Nke gara aga: Igwe anụ ahụ miri emi na-egbu mgbu mgbu anụ ahụ ịhịa aka n'ahụ egbe
Osote: Egbe Fascia eletrọnịkị ejiri aka na-ebugharị obere akwara ịhịa aka n'ahụ
Ịhịa aka n'ahụ Gun Massager
Egbe ngwaọrụ ịhịa aka n'ahụ akwara
Egbe Massager Muscle
Egbe ịhịa aka n'ahụ zuru ike
Muscle miri eletriki ịhịa aka n'ahụ egbe mma akụrụngwa
Ịhịa aka n'ahụ anụ ahụ miri emi na-enweghị eriri.
Egbe ịhịa aka n'ahụ na-ama jijiji
Egbe Fascia Eletrik ejiri aka na-ebufe dị ike ...
Isi Massager egbe miri nrụgide na-ebelata ịhịa aka n'ahụ...
Massager na-enweghị ahịhịa 30 na-agba ọsọ mkpọtụ ụda dị ala…
Massager Muscle ejiri aka, Ihe nkwụnye ncha mmiri mmiri akpaaka, Obere Massager Portable egbe, Metụ ihe ncha ncha efu, Egbe Vibrator Ejidere, Ịhịa aka n'ahụ Gun Massager,